ချစ်ကြည်အေး: ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ဂါ
Thazin Fri Nov 04, 11:07:00 PM GMT+8
အတွေးကမ္ဘာ..မှတ်တမ်း Fri Nov 04, 11:11:00 PM GMT+8
၂ နှစ်မှ သည် နောင် နှစ် ၂၀၀ သို့.... အားပေးနေပါမည်...
mstint Fri Nov 04, 11:22:00 PM GMT+8
မချစ်ရေ ၂-နှစ်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တိုင် ဘလော့ဂါဘဝလေးကို ခင်မင်တွယ်တာနိုင်ပါစေ။ စာရေးမကောင်းပါ ဆိုပေမယ့် ဖတ်လို့တော့ကောင်းပါတယ်း)။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကွန်နက်ရှင်နဲ့ နပန်းလုံးနေရတယ် မချစ်ရေ။ ညဉ့်သန်းခေါင်ထသုံးမှ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
Cameron Fri Nov 04, 11:42:00 PM GMT+8
လက်ဖက်သုပ်ဆို ဘယ်လိုလာလာ ကြိုက်ပြီးသားပဲ...။ ဒီင်္လိုပဲ မကြီးချစ် ဘာရေးရေးအကုန်ကြိုက်တယ် စွဲဆောင်မှုရှိတယ်....။ ဒီဇင်ဘာကျ ထပ်တွေ့ဦးမယ်နော်...။
sosegado Fri Nov 04, 11:48:00 PM GMT+8
၂၄ လ ပြည့်မှသည် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေ၊ ကဗျာများများ ရွတ်နိုင်ပါစေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Nov 04, 11:52:00 PM GMT+8
အသက်တစ်ရာ ဘွားဘွားချစ်ကြည်အေးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါစေ..
စာရေးချင်စိတ်ရှိလို့ စာရေးမှတော့ ရေးစရာရှိတာ၊ ရေးချင်တာတွေအကုန်ရေးမှဘဲ စိတ်အဆာပြေမှာပေါ့ အစ်မရယ်နော်..။ ဒီတော့ အစ်မချစ်တစ်ယောက် ချဉ်ငံစပ် အရသာစုံနဲ့ လ္ဘက်သုပ်တွေ ခုထက်ပိုပြီး ပုဇွန်ခြောက်နိုင်းချင်းနဲ့ ကျွေးနိုင်ပါစေလို့..
ရှေ့ဆက်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး နှစ်ရှည်လများ.. ဘလောဂ့်ရေးနိုင်ပါစေသော်..
ညီလင်းသစ် Sat Nov 05, 12:00:00 AM GMT+8
လေ ထ,ချင် ထ,ပစေ...၊ ဆက်စားဦးမယ် အဲဒီ လက်ဖက်သုပ်တွေကို..၊း) ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲ သုပ်ထား၊ သုပ်ထား..၊ သုပ်သူရဲ့ စေတနာလက်ကိုပဲ မြင်ပြီး စားခဲ့ ပါတယ်၊ ဤမှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် စားသော လက်ဖက်များအားလုံး Auramine O ဆိုးဆေးနဲ့ ကင်းဝေးပါစေသား...၊းD ၂ နှစ်ပြည့်မှသည် လာမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ဈေးကွက်မှာ CKA လက်ဖက်များ ဆက်လက်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်ပါစေဗျား...။း)
AH Sat Nov 05, 12:25:00 AM GMT+8
၂ နှစ်မြောက် ဘလော့ဂ်နှစ်ပတ်လည်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် ပိုစ်အသစ်တွေ အများကြီး တင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်အာပေးလျှက်ပါ။
မိစံ Sat Nov 05, 12:37:00 AM GMT+8
kokoseinygn Sat Nov 05, 12:51:00 AM GMT+8
ကိုဇော် Sat Nov 05, 01:03:00 AM GMT+8
ဘာပဲရေးရေး စိတ်ကူးနဲ့တော့ အားထုတ်ရသေးတာပါပဲဗျာ။ နှစ်နှစ်ပြည့်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေဗျာ။
pyaykaungaung Sat Nov 05, 01:18:00 AM GMT+8
( My ZawgyiOne font is currently unavailable, Ama Chit, and let me comment in English. )
Long Live the Chit Kyi Aye Blog!
I think 'good literature is what is written by one's heart.' And I think you write your posts with your humorous heart. So, your posts are ever alive (good to read)!
By the way, I feel your writing style is as honest as Sayagyi Thaw-Dar-Swe's style.
kay Sat Nov 05, 01:33:00 AM GMT+8
၂ ခာလည်လေး ငယ်သေးတယ် လဖက်တွေအရမ်း မကျွေး နဲ့
I can only see ur blog with ipad
PhyoPhyo Sat Nov 05, 02:08:00 AM GMT+8
ညီမလည်း စာဆို ဖတ်ချင်တဲ့စာဖတ်တာပဲ၊ အကုန် ရွေးပြီးဘယ်သူ့မှရယ်မဟုတ်ဘူး၊ ပြီးရင်လည်းမေ့တယ်၊ ၂နှစ်သမီး လက်ဖက်နှပ်လေးက စားကောင်းတယ်။ မချစ်ကြည်စာတွေဖတ်ကောင်းတယ်။ အရင်ကတည်းက ခရီးသွားပိုစ့်တွေလာလာငေးနေတာ။
နောက်နှစ်တွေအများကြီး ပျော်ရွှင်ကျမ်းမာစွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ။
rose of sharon Sat Nov 05, 06:55:00 AM GMT+8
အစုံဆိုတော့ တခါလာလည်တမျိုး...မရိုးဘူးပေါ့... ၂ နှစ်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ....
Thu Sat Nov 05, 07:15:00 AM GMT+8
အတွေးအခေါ်တစ်ရပ်၊ စိတ်ကူးတစ်ရပ်ကို ဖော်ပြရာတွင် ဘာသာစကားသည် အကြောင်းမဟုတ်၊ မိမိနိုင်နင်းသော ဘာသာစကားဖြင့် ဖော်ပြလျှင် ရသည်ဟု ကျွန်တော် ထင်သည်။(ဒဂုန်တာရာ)
Vista Sat Nov 05, 10:11:00 AM GMT+8
မချစ်နဲ့ကျနော်နဲ့ တူတယ်ဇာတ်အသွားပဲမှတ်မိတယ် ၊ဘယ်တုန်းက ဘယ်ဇာတ်ကောင်က ဆိုတာမျိုး မမှတ်မိတတ်ဖူး။
မယ့်ကိုး Sat Nov 05, 01:24:00 PM GMT+8
နှစ်နှစ်မှ စ ရှေ့ဆက်ပြီး မမ ပျော်ရွှင်စွာ စာစုံရေးနိုင်ပါစေလို့
သက်ဝေ Sat Nov 05, 02:49:00 PM GMT+8
ချစ်... အသက်တွေကြီးတဲ့အထိ... စာတွေ ဆက်ရေးသွားကြရအောင်လေ... နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကနေ... နှစ်ပေါင်းများစွာသို့... ...
An Asian Tour Operator Sat Nov 05, 08:17:00 PM GMT+8
လဘက်ဆိုတာ နဲ့ ကို ကြိုက်ပြီးသား။
sonata-cantata Sat Nov 05, 11:28:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်ရေ... ဘလော့ဂ်က ဒီက အတွက်တော့ အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာပါ။
အခုတော့ အပေါင်းအသင်းကောင်းလို့ ဖဘ ဆိုတဲ့ဟာပါ မှီဝဲနေတယ်...။
kk Sun Nov 06, 12:55:00 AM GMT+8
To "K" blog ,မန်မာပြည်ကလူတွေ သူများနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဘာပြသနာမှမရှိဘူး
ဘလော့တွေဖတ်လာတာ ၄ - ၅ နှစ်ရှိပြီ ဒီဘလော့အပါအဝင်ပေါ့ ဒီဘလော့ကိုဖတ်လာတာ ၃ - ၄ နှစ် မကတော့ပါဘူး....ဘယ်ဘလော့မှာမှလဲ ကွန်မန့် မပေးခဲ့ဖူးဘူး. ဒါဟာပထမဆုံး ကွန်မန့် နဲ့ ဒီဘလော့ ပိုင်ရှင်ကိုလဲ တော်တော် စပ်ဆုတ်သွားတယ်...ရှင့်ဦးနှောက်အနေအထားနဲ့ ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စက အဲလောက်မရိုးရှင်းဘူးဆိုတာ သိရင်သိ ... ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာဖြစ်မယ် ခွေးနေရာမရတဲ့ ရှင့်အမျိုးတွေကို အိမ်ခေါ်ထားပြီး ဖင်ချခံလိုက် လိုတာဖက်ပိုပြီး စတန့် ထွင်ပြမနေနဲ့ (ဘလော့လောက/Face book လောကမှာ သူများ မတွေး မရေး မမြင်တဲ့ ရှု့ထောင်ကနေ) တွေးလိုက်ရေးလိုက်မယ်ဆိုပြီး
o K blog ,မန်မာပြည်ကလူတွေ သူများနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဘာပြသနာမှမရှိဘူး
kk Sun Nov 06, 12:56:00 AM GMT+8
Unknown Sun Nov 06, 01:09:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာပါ။ ပထဆုံးလာလည်ခြင်းပါ။ နောက်လည်း လာပါ့မယ်။ စာတွေရေးနော်.. ဘာရေးရေး လာဖတ်မယ်ဗျ။
အမကမှ ၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးက ခုမှ ၃ လသားပဲ ရှိသေးတယ်..:D
ကြိုးစားမွေးရမှာပေါ့ဗျာ။ တခါတလေ ရေးချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုကစ ရေးရမယ်မသိတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျာ။
နော် လည်း စာရေးညံ့တယ်ဗျ။ မယုံရင် လာဖတ်ကြည့်.. :D
blackroze Sun Nov 06, 02:25:00 AM GMT+8
ကိုအောင် Sun Nov 06, 04:21:00 AM GMT+8
(၂)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရအဖြစ် ကံစမ်းမဲ ဖောက်မည်ဆိုလျှင် ကျနော်ကိုလည်း မမေ့ဖို့ သံချောင်းလာခေါက်ပါသည်၊ မီးကင်းက မဟုတ်ပါ ...
စံပယ်ချို Mon Nov 07, 03:20:00 AM GMT+8
မချစ် ၂ နှစ်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ
ညိမ်းနိုင် Mon Nov 07, 03:43:00 PM GMT+8
၂နှစ်ပြည့်မှသည် အစ်မချစ်ဘလော့လေး နှစ်ရာကျော်တည်
အင်ကြင်းသန့် Mon Nov 07, 09:04:00 PM GMT+8
၂၄လပြည့်မှသည် နောင် လပေါင်း ရာထောင်ချီအထိ အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ပါစေလို့....:)
Maung Myo Mon Nov 07, 11:16:00 PM GMT+8
ချစ်သောစိတ်အခံထားပြီးဖတ်တော့လည်း အစ်မချစ်စာတွေက ချစ်စရာကောင်းနေတာပါပဲဗျား)
ကျနော်ရေးဖူးတဲ့ ဘလော့ဂါဆိုတာ ဘာလဲ ကဗျာလေး သွားပြေးသတိရတယ် ““ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စား သူများ ဝေဖန်တာ ခံရတာ ဘလော့ဂါ ” ဆိုတာလေးး) ကျနော်တို့တွေဟာ ၀ါသနာ အရ ရေးနေကြတာမို့ လိုင်းတွေ အသေတွေ မျဉ်းတွေ မလိုပါဘူးဗျာ အဆင်ပြေသလိုသာ စီးမျောကြတာပေါ့လို့နော့်။
ဘလော့ဂါမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ အရေးတော်ပုံအောင်၇မယ် (ဟဟား ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး )
အိမ့်ချမ်းမြေ့ Tue Nov 08, 06:12:00 AM GMT+8
T T Sweet Tue Nov 08, 09:01:00 AM GMT+8
လ္ဖက်သုတ်များ ထပ်စားချင်ပါသေးသည်။ စာရေးမကောင်းဟုပြောသောအခါ အကျွနုပ် ဘာပြန်ပြောရမည်မသိ နှုတ်ဆိတ်၍သာ ပြန်လေပြီ။
အမ်တီအန် Tue Nov 08, 05:19:00 PM GMT+8
အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာ လက်ဖက်သုတ် အရသာစုံ သုတ်ကျွေးနိုင်ပါစေကြောင်း ( အဲ.. ဘလော့ဂင်နိုင်ပါစေကြောင်း) ဆုမွန်ခွှေလိုက်ပါတယ် အစ်မချစ်ရေ...။
chokya Tue Nov 08, 09:21:00 PM GMT+8
၂နှစ်ပြည့်ဘလော့လေးမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေကြောင်း :)
ဖိုးတုတ် Wed Nov 09, 11:07:00 AM GMT+8
၂နှစ်မြောက်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်နိုင်ပါစေ၊
သတိုး Wed Nov 09, 12:34:00 PM GMT+8
'ကျွန်မ စာတွေ ဆက်ရေးပါဦးမည်။'
ပြောပြီးကတည်းက အသစ် မဖတ်ရတော့ဘူးဗျို့။း)
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) Thu Nov 10, 09:03:00 AM GMT+8
လဘက်သုပ်ဆို ငယ်တုန်းက ချဉ်စပ်၊ အခု ကြီးလာတော့ လဘက်အသားခါးသက်သက်မှ ပိုကြိုက်တတ်လာတယ်။
၂ နှစ်ပြည့်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ လဘက်သုပ်များများ သုပ်နိုင်ပါစေ။း)
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် Mon Nov 14, 03:00:00 AM GMT+8
၂ နှစ်ပြည့်မှ နောင်နှစ်များစွာ စာလေးတွေရေးရင်း ကြည်နူးရွှင်လန်းနိုင်ပါစေလို့....
ပန်းချီ Mon Nov 14, 09:09:00 AM GMT+8
ဟွန့်...ကျွန်မစာရေးမကောင်းပါရှင်...တဲ့လား?? ပြောချင်ဘူး..ပြောချင်ဘူး..ပြောချင်ဘူးဆို လုံးဝကိုးးးးးးးး ပြောချင်ဘူး...း))))
စိတ်သွားရာကိုယ်ပါလို့ ကလောင်သွားလည်း ထက်သထက် ထက်နိုင်ပါစေ..မမး)
မဒမ်ကိုး Mon Nov 14, 03:49:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ မမရေ